Naya Post Nepal | सुत्केरी कक्षमै जंगली भालु’को आ’तं’क,हस्पिटलमा भयो यस्तो हं गामा (भिडियो हेर्नुस्)
सुत्केरी कक्षमै जंगली भालु’को आ’तं’क,हस्पिटलमा भयो यस्तो हं गामा (भिडियो हेर्नुस्)
यो समाचार रहेको छ ताप्लेजुङ जिल्लाको। मानिसले जंगली जना वार मा र्न हुदैन तर यदि त्यसले मान्छेलाइ आ क्रमण गर्दछ भने त्य सलाइ मार्न पर्दछ। मान्छे भन्दा ठु’लो चिज केही पनि हुदैन। पटक पटक यहाको ठाँउमा भा लुले आ क्रमण गरि रहेको कुरा उनी सुना उछन।
उनी भन्छन “गोलि हान्न पाइने भए मारिसक्ने थिए ” हस्पिटल मा महिला डेलिभर हुने ठाँउ मै भा लु छिरे पछि हगामा मचिएको छ। बि’रामिको उपचार गर्ने हस्पिटल मै भा लु आएर झन बिरामी पार्ने वा मार्ने कै अवस्था सृजना भै रहदा त्यसलाइ मार्न पर्ने स्थानीय को माग रहेको छ।
स्थानीय भन्छन ” के त्यो भा लु ले खावोस भनेर केही नगरी सुति दि नु त?? मान्छे भन्दा ठुलो चिज केही पनि हुदैन । उसले आ क्रमण गर्दा हामीले पनि त्यसलाइ मा र्न आउनु पर्छ भन्छन।
यो पनि ,,साढे दुई करोड लागत रहेको ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ ले रिलिज भएको एक हप्तामै पाँच करोडको व्यापार गरेको दा”बी गरि एको छ । फिल्मकी निर्माता एवं नायिक पूजा शर्माले एक हप्ता मा नै फिल्मले ४ करोड ९५ लाखको व्यापार गरेको फेसबुकमार्फत दा बी गरेकी हुन् ।
एक गायिकामाथि नायक पल शाहमाथि ज’बर्जस्ती क’रणी आ’रो’प को जा’हेरी .परेको. भोलिपल्ट उनैले खेलेको फिल्म रिलिज भएको थियो । फिल्म रिलिज हुने दिन नै ग’म्भीर आरोपमा जाहे’री परे पनि एक हप्तामा नै फिल्मले राम्रो आम्दानी गरेको दा’बी गरिएको हो ।
रिलिजको अघिल्लो दिनको प्रि मियरमा उपस्थित हुन खोजे पनि जाहेरी परेका कारण पल रोखिएका थिए । केही प्रहरीको खोजीमा रहेका पलले केही दिनमै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ पुगेर आफैं गिर’फ्तारी दिएका थिए । सात दिने म्याद म्यादको अवधिमा शाह माथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । फिल्म रिलिज भएको शुक्रबार एक हप्तामात्रै पुगेको छ ।
‘जय दर्शक जय नेपाली सिनेमा आज बाट भव्य सफलता साथ देशभर दोश्रो हप्तामा ३म)यस्तो)गीत)गाँउछु)२ सम्पूर्ण सिनेमा हलहरू सम्पूर्ण पत्रकार ज्यूहरू सम्पूर्ण दर्शक ज्यूहरू सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी ज्यूहरू मा यो माया सम्मानको लागी मनै देखी धन्यबाद
म यस्तो गीत गाँउछु २’ नायिक एवं निर्माता शर्माले सामाजिक संजालमा लेख्दै पहिलो हप्ता फिल्मले चार करोड ९० लाख उ ठाएको दाबी गरेकी हुन् ।
थप समाचार : काठमाडौं / नायिका रेखा थापाले आफूलाई यु ट्युब मा तथानाम गा’लीग’लौ’ज गरेको भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिएकी न्। थापाले आफूहरुको चरित्र ह’ ‘त्या भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिए की छिन् ।
विद्युतीय माध्यममार्फत् आफ्नो मानमर्दन र गा ली बे’इ’ज्ज’ती गरेको उल्लेख गर्दै रेखाले युट्युबमा अभिव्यक्ति दिने शर्मिला वाइ बाविरूद्ध निवेदन दिएकी हुन्।
शाहको पक्षमा तनहुँमा दैनिकजसो प्रदर्शन हुन थालेपछि रेखाले बा लिकाको संरक्षण हुनुपर्ने धारणा फेसबुकमार्फत् व्यक्त गरेकी थिइन्। रेखाले सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि युट्युबमा उनीवि’रू’द्ध घृ’णा फैलाउने अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका थिए।
व्यूरोका प्रहरी ब’रिष्ठ उपरीक्षक नवीन्द अर्यालका अनुसार ए वान मिडिया दर्ता भए नभएको जानकारी दिन प्रेस काउन्सिललाई पत्र चार गरिएको छ
२०७८ फाल्गुन २२, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 302 Views